Ukholifulawa kunye cream cream | Ukupheka kweKhitshi
UMaria vazquez | 21/02/2021 10:00 | Iiresiphi zemifuno
Siqale impelaveki ngokulungiselela iresiphi elula, icauliflower kunye neapile cream endiyathemba ukuba uya kuyongeza kwimenyu yakho yeveki kule veki. Kuba njengazo zonke iikhrimu inombulelo kakhulu; Ungayilungiselela ngeCawa kwaye ke ubenobutyebi obukhulu bayo gqibezela izidlo zakho nezidlo sangokuhlwa ngeentsuku ezintathu.
Ndilungiselele ii-servings ezine, kodwa kuya kufuneka uphinda-phinde izixa ukuba ufuna zisasazeke kancinci. Izithako zilula: itswele, ilike, icauliflower, iapile kunye nezinye izinongo zencasa. Musa ukumangaliswa kukudityaniswa kwekholifulawa kunye neapile, ngumdibaniso omnandi. Icauliflower isebenza kakuhle zombini kunye neapile.
Lungisa le cream ilula kakhulu, kuya kufuneka ukhathazeke ngayo susa zonke izithako kakuhle bade bajika umbala omnandi wegolide ngaphambi kokongeza amanzi. Ngale ndlela uya kube uphucula incasa yekrimu. Ngaba unesibindi sokuyilungiselela kunye nam? Unokuzama ezinye iindibaniselwano esizilungiselele ngaphambili ukholifulawa kunye nomnqathe okanye itheniphu. Tyhila!
Le cauliflower kunye neapile cream ilula, ilula kwaye isempilweni. Ukongezwa okukhulu kwimenyu yakho yeveki. Ngaba unesibindi sokuzama?
1 ithisipuni igwele lesondlo
Sibeka amacephe amabini eoyile ukutshisa kwi casserole.
Yongeza i-anyanisi ekhethiweyo kunye neelikhi zibe ngamaqhekeza amane kwaye saute imizuzu emibini okanye emithathu.
Emva yongeza ukholifulawa kwiifreythi ezincinci Fry ide ithathe umbala omnandi wegolide.
Ke sidibanisa iapile kwaye ndavula imizuzu embalwa.
Ixesha ngetyuwa nepepile, yongeza iturmeric kunye negwele yesondlo kunye Sigquma ngamanzi okanye umhluzi wemifuno. Ngokwam, ndihlala ndivumela amanzi abe ngumnwe phantsi kwemifuno; Yindlela endifumana ngayo ukhilimu otyebileyo.
Siyagubungela, pheka imizuzu eyi-15-20 emva koko sagaya.
Sikhonza iapile eshushu kunye nekhrifulawa yokholifulawa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: yokuqalisa » Izitya » Iiresiphi zemifuno » Ikholifulawa kunye nesuphu yeapile
Cookies zeebhiskithi zethanga